Date My Pet » 7 Ugly Chokwadi About Modern Dating
Dating kwave chikamu nechokumadokero tsika kubva refu. zvisinei, kudanana ano ndiko yekudyidzana kwakasiyana chii kare panguva 60s, 70S, 80S uye kunyange 90s.
Kwatombova Indaneti uye nawo chidzoke zvokufambidzana Websites zvikurukuru kukonzera kuchinja uku. Kunyange zvazvo pane mijenya zvinhu kuti ano zuva kudanana nani uye zvinonakidza (zvirokwazvo kudanana paIndaneti ndomumwe wavo), Kuvapo demerits hazvigoni kurambwa zvakare. Pazasi pane mhou chokwadi nezvokudanana ano kuti kuchaita tinyatsoziva demerits ivavo.
1. Vanhu kutokanganwa kutaura kune mumwe
Easy kutaurirana ndeimwe chikuru zvipo zvemichina akapa vanhu. nhasi, vanhu murudo vawane kugara vaonane mumwe kunyange vari kure nemakiromita. zvisinei, mberi uku zvemichina rave auraya vanhu chinangwa kutaura.
Ehe, hamuna kuverenga here; vanhu vakawanda nhasi kana kupanga kunzwa inzwi ravo Mudiwa, dzakatevedzana mameseji kuita basa navo. Zvakadini pafoni? Oh, nokuti vakawanda avo zvinhu zvekare.
2. Uri mumwe, kana uri vasingazivi
Unoda kuwana mwoyo munhu? nhasi, nyore nzira yokuita izvozvo nokuva vasingazivi. Iwe achazviratidza kukwezva wako kufambidzana naye, kana iwe hanya zvishoma. mazuva aya, anenge hapana sokuti kufarira vanhu kufarira.
3. Reactions vari dzinenge nguva dzose dzinonyengera
Decoding akadaro anenge zvisingaiti kusvikira vanhu kuva rudzi varipo vanonetseka. Munhu haasi zvachose mwoyo newe anozviita nenzira imwecheteyo uye ane zvakafanana munotarira ake / chake somunhu anonyatsoda iwe. Vanhu vazhinji, nhasi, wakanganwa sei manzwiro uye vanofunga kuti unhu hwakanaka.
4. mari, mari uye mari uye ipapo anouya chitarisiko
Pamusoro apa ichokwadi kunyanya varume; vakadzi, uchava mumwe nzira rwakapoteredza (pakuonekwa anouya wokutanga uye ipapo mari). Muchidimbu, kana munhu uri kufambidzana uchava kufarira mamuri zvinoenderana apo uri semunhu kure sezvo izvi zviviri hanya. Ehe, chete mbiri idzi; zvose anouya pashure izvi.
5. Zvinhu zvakare yakarongwa kuti kudanana
Nhasi kuronga kudanana hangouts vava nyore. Munoita foni uye basa vanopa kuchaita kuronga kenduru chiedza chisvusvuro kwamuri. Izvi zvinooneka yadzima runako chete akashandiswa kuwadzana zvirongwa zvakadaro ambotaurwa.
6. Privacy? What zvakavanzika?
Hapana dzakavanzika pamusoro kudanana nhasi. Iwe wafambidzana munhu masikati uye manheru uchaona mapikicha vaviri venyu rarira pamwe rumwe munhu evanhu nhau nhoroondo anoteverwa dzakatevedzana nemashoko chete creepy zvirevo. Kana usina kujaira, hamuzi kuchizvarwa ichi.
7. Vachiti zviri pamusoro zviri nyore zvakadaro ikozvino
Just rugwaro nemumwe wako vachaziva kuti imi havachiri kufarira maari / her. Dzimwe nguva marambana magwaro ane chete nemudzimai kana mashoko. Chiri vachiputsa ukama here kuti nyore?
nhasi, vanhu zvirokwazvo zvikuru kushivirira uye kurongwa; Kushayiwa nguva inewo dhimoni rakakura. zvisinei, hazvigoneki kurambwa kuti vachiri kuda uye kudiwa. saka, Nokukurumidza nguva isvike apo kufambidzana rinova zvemangwana zvinofadza sezvo vaimbova kare.